iShare EditShare QScan အလိုအလျောက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare QScan Automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး ioGates ထပ်ပြောသည်ပံ့ပိုးမှု
Chelmsford, Mass - ။ ioGates တစ်ဦး ထုတ်လွှင့် Pix™ကုမ္ပဏီ, ယနေ့ပြုလုပ်သစ်ကိုများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ EditShare QScan ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမိသားစု automated ။ မတ်လထဲမှာကြေညာခဲ့သည်, QScan ဖိုင်-based ဗီဒီယိုနှင့်လိုက်နာမှုနှင့်ဖြန့်ဝေလိုအပ်ချက်များကိုရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်အသံ AQC ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်စမ်းသပ်မှု parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်သောအခါအ retesting ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲနီးပါးချက်ချင်းအမှားများကိုပြသရာက၎င်း၏ Single-Pass နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းပညာ, နှင့်အတူ QScan ရွယ်ရက်ပေါင်းမဟုတ်ရက်သတ္တပတ်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
"EditShare QScan ပြီးသား PBS နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံပီပီအပါအဝင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ပေးပို့ပုံစံများကိုထောက်ပံ့နေသည် "Luis Rodriguez များအတွက် QScan စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည် EditShare။ "အဲဒါကိုယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ရဲ့ clients များအရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစေသည်ကြောင့်, ငါတို့သည် ioGates QScan ပေါင်းစည်းခဲ့သည်အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါ။ "
AQC software ကို TV ကဘူတာနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုကျယ်လောင်သောအဘို့အဝင်နဲ့အထွက်ဖိုင်တွေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အဆောက်အဦးများ, macroblocking, ကျောင်းထွက်, အေးခဲဘောင်နှင့်အခြားအလားအလာအမှားများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ "QScan နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းမှုမီဒီယာဖိုင်အတည်ပြုရန်နှင့်် ioGates လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွင်းအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်," Jesper Andersen က, ioGates ၏ COO ရှင်းပြသည်။
သစ်ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု EditShare QScan AQC ထုတ်ကုန်လိုင်း ioGates cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အသိမှတ်ပြု, အ ioGates cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအပ်လုဒ်တင်, မျှဝေမှု, ပူးပေါင်း, ဖြန့်ဝေခြင်း, သိမ်းဆည်းမီဒီယာ content များအတွက်လုံခြုံတဲ့ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ ယင်း၏ browser ကို-based လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်ကအကြောင်းအရာခွဲဝေမှုနဲ့ productivity တားဆီးကြောင်းရှုပ်ထွေးသောပုံစံချပေးနှင့် FTP ကိစ္စရပ်များကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ioGates လည်းအင်အားကြီး BPswitch ™ဘက်ပေါင်းစုံ၏ထိန်းချုပ်မှု-over-IP ကိုစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း BPNet ™ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ် ထုတ်လုပ်မှု switcher။ အားလုံးအသံလွှင့် Pix Switcher တစ်ခု ioGates အကောင့်များပါဝင်သည်။
အသံလွှင့် Pix အကြောင်း တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ coupled ခလုတ်နှင့် 3D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ် CG နှင့်အတူအသံလွှင့် Pix မူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်နည်းပညာနှင့်အတူပါဆုံးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းယူနစ်ကနေအကြီးစား, Multi-system ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့, တိုင်းအသံလွှင့် Pix ဒေသအလိုက်နှင့် IP ကျော်သင်၏ workflow ပိုကောင်းအောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ခုကျယ်ပြန့် toolset ပါရှိပါတယ်။ Plus အား၎င်း၏ BPNet ဂေဟစနစ်လုံခြုံသောမိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။ 2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix 100 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များရှိပြီးအစိုးရ, ထုတ်လွှင့်, streaming များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အမြင်အာရုံရေဒီယို application များအတွက်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.broadcastpix.com.
ထုတ်လွှင့် Pix, BPNet နှင့် BPswitch broadcast Pix, Inc မူပိုင်ခွင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ Switcher USA တွင်လုပ်နေကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix လိုက်နာခြင်း EditShare ပေါင်းစည်းမှု ioGates QScan အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-04-27
ယခင်: ဧည့်ကြို (အပိုင်းအချိန် #9015)